FBC - Ragaalee-eyyamaa mirkaneeffannaaf gara abbaa-taayitichaa dhaqan keessaa walakkaa kan ga’an kan sobaa akka ta’an himame
Ragaalee-eyyamaa mirkaneeffannaaf gara abbaa-taayitichaa dhaqan keessaa walakkaa kan ga’an kan sobaa akka ta’an himame
Finfinnee, Bitootessa 4, 2010 (FBC) Abbaan-taayitaa Geejibaa Federaalaa konkolaachiftoota eyyami konkolaachisummaa isaanii akka isaanii mirkaneeffamuuf garas fidan keessaa kanneen walakkaa ga’anii eyyama konkolaachisummaa sobaa ta’uusaa mirkaneesse.
Biyyattiin sababa balaa tiraafikaan waggaa waggaatti namoota kuma 4 ol fi qabeenyaa Birrii biliyoona 1 dhabdi.
Kanaafis balaa tiraafikaa konkolaachiftootaaf ka’umsi ga’umsi dhibuu fi eyyama konkolaachisummaa seera-qabeesssa hin-taaneen socho’uu isaaniiti. Kunis too’annoo naannolee fi bulchiinsa magaalaa Finfinneetti geggeffameen mirkanaa’eera.
Waggaa kana Naannoo Amaaraatti too’annoo geggeffameen konkolaachiftoota shakkiin too’annoo jala oolfaman 278 keessaa 91 eyyami isaanii kan sobaa ta’ee argameera. Kaan 20 kan ta’an ammoo eyyama konkolaachisummaa osoo hin-qabaatin konkolaachisaa kan turan ta’uusaanii Hogganaan Biiroo Daandii fi Geejibaa naannichaa Obbo Jaanxiraar Abbaay Faanaa Biroodkaastiing Korporeetitti himaniiru.
Naannoon Kibbaa eyyama konkolaachisummaa sobaa qabatanii konkolaachisuun yaaddoo itti-ta’es konkolaachiftoota hedduu haala kanaan socho’aa turan qabuusaa beeksiseera. Naannichatti badiiwwan gara-garaan qabamanii kan sakatta’aman konkolaachiftoota 292 keessaa konkolaattonni 108 eyyama konkolaachisummaa sobaan osoo konkolaachisanii kan argamanii fi balaa kan qaqqabsiisan ta’uusaanii Itti-aanaan Hogganaa Biiroo Daandii fi Geejibaa naannichaa Obbo Sukkaaree Shudaa ibsaniiru.
Karaa biraatiin Daayirektarri Olaanaa Abbaa-taayitaa Geejibaa Federaalaa Obbo Kaasaahun Haayilamaariyaam akka ibsanitti eyyami konkolaachisummaa isaanii akka mirkanaa’u gara abbaa-taayitichaa kan dhufan keessaa walakkaa kan ga’an eyyama konkolaachisummaa sobaa qabatanii argamaniiru.
Daayirektarichi Finfinneettis baatiiwwan darban waggaa kanaatti sakata’a raawwatameen eyyami konkolaachisummaa sobaa dhibbantaa 24 argamuusaa fi eyyamoonni konkolaachisummaa seera-qabeessa hin-taane naannolee kaan keessattis mul’achuusaanii akka fakkeenyaatti kaasu.
Ka’umsa balaa tiraafikaa baay’ee yaachisaa ta’e kana bu’uuraa balleessuuf abbaan-taayitichaa sadarkaa biyyaalessaatti sirna diriirsuuf karoorfachuusaa ibseera.
Sirni kun boqonnaa lamatti kan qoodame yoo ta’u, abbaan-taayitichaa sirni jalqabaa kuusaa ragaa qopheessuun eyyama konkolaachisummaa konkolaachiftoota kutaalee biyyattii hunda keessaa too’achuu dandeessisa. Eyyama konkolaachisummaa konkolaachiftootaa kuusaatti galchuun jalqabamuusaa kan ibsan Obbo Kaasaahun, sirna kanaan eyyama konkolaachisummaa kan fudhatan qofa osoo hin-taane qaamoleen kennanis kan keessatti haammataman ta’a jedhaniiru.
Sirni inni lammataa ammoo itti-fufiinsa kan qabuu fi piroojaktii damee geejibaaf jedhamee Baankii Addunyaa waliin hojiitti kan hiikamudha.
Piroojaktoonni kunniin wagggoota lama dhufanitti hojiitti kan seenan yoo ta’u, kun hojiitti hanga seenamutti garuu sirni abbaan-taayitichaa waggaa kana jalaqabu hojiitti kan hiikamu ta’a.
Piroojaktiin kun maqaan ‘Piroojaktii Damee Geejibaa Sirna Ragaan Wal-quunnamsiisuu’ jedhu kan kennameef yoo ta’u, bajati liqaa Doolaara Ameerikaa miliyoonni 300 Baankii Addunyaa irraa argame qabameeraafi. Maallaqa kana keessaa Doolaarri miliyoonni 90 sirna Konkolaachisaa fi Ragaa Konkolaataaf kan oolu ta’uu ragaan abbaa-taayitichaa ni-mul’isa.
Sirni bajata kanaan diriirfamus ragaalee biyyattii keessa jiran iddoo tokkotti too’achuu kan dandeessisuu fi adeemsota konkolaachisaan guyyaa eyyama konkolaachisummaa baasuuf galmaa’ee jalqabee hanga eyyamicha argatutti jiran yero- yerootti kan mul’isuu fi kan beeksisudha.
Sirni kun hojiitti wayita seenu qaamni too’ataan kamiyyuu salphaatti ‘neetworkii mobaayilaa’ fayyadamuun hojimaata ittiin-too’achuu danda’udha jedhameera. Akkasumas eyyamoota konkolaachisummaa seera-qabeessa hin-taane salphaatti adda-baasuu kan dandeessisudha. Kana malees, hojimaata lakkoofsota eyyama konkolaachisummaa maxxanfamanis garaa-gara gochuu kan danda’u fi rakkinichaaf furmaata guddaa kan ta’u ta’uusaa daayirektarichi himaniiru. Zufaan Kaasaahuntu gabaase.
Oduuwwan Biroo « Amajjii 2010 amma Muddee 2011tti lammiilen deeggarsi namoomaa isaan barbaachisu miiliyoona 7.8	Ayarlaand Itiyoophiyaaf deggarsa Yuuroo miliyoona 3 arjoomte »